Teaser အသစ် ထဲမှာ လေးထောင့်ပုံစံ Headlights တွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ 2022 Hyundai Ioniq5! – MyMedia Myanmar
Teaser အသစ် ထဲမှာ လေးထောင့်ပုံစံ Headlights တွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ 2022 Hyundai Ioniq5!
အခုဆိုရင်တော့ Hyundai ရဲ့ All-New လျှပ်စစ် ကားအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် အချိန်ကာလအားဖြင့် ရက်သတ္တပတ် အနည်း ငယ်လောက်ပဲ လိုတော့တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ Ioniq5အမျိုးအစား ကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ အလယ် ပိုင်းလောက်မှာ ပွဲထုတ်ဖို့ ခန့်မှန်းထားရတာ ဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ မျှော်လင့်စရာ ကောင်းတဲ့ နောက်ထပ် Teaser Video တစ်ခုကို ချပြလိုက် ပြန်ပါတယ်။ အဆိုပါ Video ကတော့ အခုတစ်ခေါက်မှာ တိုတို ရှင်းရှင်းပဲ ဖော်ပြသွားတဲ့ အခြေအနေ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာ တစ်ခုကတော့ Video Clip ရဲ့ ၄၃ စက္ကန့် လောက် အရောက်မှာ Hyundai ဟာ Telluride နဲ့ Sonata တို့ မှာ ထည့်သွင်းထားနိုင်တဲ့ Dynamic Scenes လိုမျိုး တွေကို ပါ ပြသသွားခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Ioniq5ကို ဒီဇိုင်း ပိုင်း အရ ခြုံငုံ ပြသခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် လေးထောင့် ကျတဲ့ LED Headlights တွေ ကို ဖော်ပြသွားတာကြောင့် ဒီဇိုင်းအသစ် နဲ့ စတင် ကိုင်လှုပ်ဖို့ရာ သေချာနေပြန်ပါတယ်။ အခု Video အသစ်ကတော့ အချက်အလက် တွေ အများကြီး ပြောကြားသွားတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့်လည်း အနည်းဆုံးတော့ အခု လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံး ကားအသစ်ရဲ့ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကိုတော့ မြင်တွေ့လိုက်ရ သေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလ အစောပိုင်း လောက်တုန်းကပဲ Hyundai အနေနဲ့ အဆိုပါ Ioniq5ကား အသစ်ရဲ့ အကြို ပုံရိပ် သုံးမျိုးကို ချပြခဲ့ပြီးတော့ Parametric Pixels Design Feature လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ အသေးစိတ် ဒီဇိုင်း တစ်ချို့ကိုလည်း အသုံးပြုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ နည်းပညာဟာ Headlights နဲ့ Taillights တွေ အတွက် အဓိက ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်း တွေ ဖြစ်ပြီး Digital Image တွေရဲ့ အသေးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေကို နမူနာ ယူပြီးဖန်တီးထားတာ လို့လည်း ဆိုထား ပြန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြား သော စိတ်ဝင်စား စရာဒီဇိုင်း ပိုင်း အချက်အလက် တစ်ခု အနေနဲ့ကတော့ Clamshell Hood အပိုင်းပါပဲ ၊ အဆိုပါ အပိုင်းကတော့ Panel Gaps တွေ အကြား က ပုံစံတွေကို လျှော့ချ ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပုံစံဖြစ်ပြီး ကားရဲ့ Aerodynamics အပိုင်းကို တော့ ပိုမို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင် ပေးနိုင် မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Production အဆင့် ရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ် ကားကတော့ Concept 45 က နေ ရယူ ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပြီး Hyundai နဲ့ Kia တို့ ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားမယ့် E-GMP Platform အသစ်ပေါ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ် ပေးလာမယ့် ပထမဆုံး ကားသစ် လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ အဆိုပါ Platform ကတော့ ပြားချပ်ချပ်အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ အတူ ဘက်ထရီ တွေကိုလည်း Skateboard ပုံစံ ဖန်တီး ကာ ကားရဲ့ အောက်ခြေမှာ တပ်ဆင်ပေးထားမှာပါ။
Standard အနေနဲ့ကတော့ Ioniq5ကို Dual-Motor Setup နဲ့ ပွဲထွက်လာနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပြီး Fast-Charging အားသွင်း စနစ်လည်း ထည့်သွင်း ပေးလာနိုင်ကာ စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု အပိုင်းမှာလည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးလာနိုင်ပြီး WLTP Standard အရတော့ ၅ မိနစ် လောက် အားသွင်းထားရုံနဲ့ တင် ၆၃ မိုင် ( ၁၀၀ ကီလိုမီတာ ) အကွာအဝေး အထိ မောင်းနှင်နိုင်အောင် ဖန်တီး ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ကောင်းမွန်ကျစ်လစ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ Range အနေအထားတို့ အပြင် ထင်ရှား ပြီး ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်း ပိုင်းတွေ ကို မြင်တွေ့ရနိုင်တာ ကြောင့် Ioniq5ဟာ မထွက်ရှိလာခင် ကတည်းကပင် လျှပ်စစ် ကားအခန်း ကဏ္ဍ သစ်ထဲမှာတော့ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ခံ နေရတဲ့ ကားအသစ် တစ်စီး ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် Hyundai ဘက်ကလည်း မကြာမီ ဖေဖော်ဝါရီ လ အလယ်ပိုင်း လောက်မှာ စတင် မိတ်ဆက်ချပြသွားမှာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုထား တာကြောင့် အဆိုပါ နေ့ရက်မတိုင်ခင် ပိုမိုထင်ရှားတဲ့ Teaser တွေကိုလည်း စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ် ဖြစ်အောင် ထပ်မံ ပြသပေးလာနိုင်ဦးမယ် လို့ပဲ မျှော်လင့် ရပါတယ်။
The post Teaser အသစ် ထဲမှာ လေးထောင့်ပုံစံ Headlights တွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ 2022 Hyundai Ioniq5! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-27T16:31:17+06:30January 27th, 2021|MYCARS MYANMAR|